Shandong XinhaoHD International Trade Co., Ltd yinkampani lokuvelisa kunye norhwebo olubanzi e China. Le mveliso ziqulethe yonke uthotho ngezantsi okanye iimatshini fusion 1600mm lempundu ngokulinganayo, oomatshini kufanelekile, oomatshini iwelding Zonke iinqwelo-ezimilise, oomatshini umbhobho ukusika zeplastiki, ngokwemfundo kwanancedisayo ezizodwa ezahlukeneyo kwakhona tools.We athengise umbhobho yonikezelo lwamanzi iHDPE, umbhobho zibuya, umbhobho igesi, ubushushu imenza andantistatic pipe imigodi nogwali abangabancedani izixhobo, floater, emiseleni zeplastiki ngoko oomatshini on.Our ziye ngokubanzi isetyenziswa umbhobho ezahlukeneyo, ukwenziwa kufanelekile, irhasi kunye namanzi corporation, umbutho zobungcali zokwakha. Thina ke wamkela kubabalwa yokusebenza iindleko elungileyo kunye nomgangatho oluthembekileyo zombini ekhaya nakumazwe aphesheya.
Thina ukuhlakulela ubuchule ekugcineni ubugcisa, ulawulo lwemveliso, imveliso kunye neentengiso. Kwasekwa ubudlelane nokubambisana okuhle amaziko ophando yasekhaya, ezahlukeneyo abasebenzisi PE, umbutho zobungcali zokwakha. Ekuphuhliseni imveliso, ezintsha zobuchwepheshe, ukuphuculwa kwemveliso, ekukhokeleni kwinqanaba basekhaya thina.
Thina inzuzo enkulu kwii-asethi, ubugcisa, ulawulo, italente, utyalo-mali. Kushishino lwasekhaya, siya kuphumelela kwindawo yokuqala. Sibamkela abahambahambayo abarhwebi, abahlobo ukuba baqhubeke uphando kunye nothetha-thethwano. Ukuphuhlisa uqoqosho lwentsebenziswano, Yenza ezikrelekrele.